- एजेन्सी | मंगलबार, चैत २२
प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद विघटन गरेसँगै चरम राजनीतिक संकट झेलिरहेको छ पाकिस्तान । आफूविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि रन्थनिएका खानले सभामुखलाई प्रयोग गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न लगाए । र, त्यसलगत्तै उनले संसद विघटन भएको घोषणा गरे ।
संसद विघटनविरुद्ध विपक्षीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पाकिस्तानका चर्चित क्रिकेट खेलाडी खान १८ अगष्ट २०१८ मा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा उनले ‘नयाँ पाकिस्तान’ बनाउने वाचा गरेका थिए । तर, उनी वाचा पूरा गर्न असफल भएका छन् । हालसालै मात्र उनले आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।
१. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल
भ्रष्टाचारमुक्त नयाँ पाकिस्तान बनाउने नारा दिए पनि उनको कार्यकालमा पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार मिटर झनै बढ्यो । ट्रान्सपेरन्सी इन्टरनेसनलले २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ । २०२० को तुलनामा पाकिस्तान भ्रष्टाचारको सूचकांकमा १६ स्थान तल झरेको छ । १८० देशमा गरिएको अध्ययन अनुसार पाकिस्तान १४० औँ स्थानमा छ । २०१८ देखि भ्रष्टाचारमा निरन्तर ओरालो लाग्दै गरेको पाकिस्तानका प्रतिपक्षी दलहरूले इमरान खानमाथि भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।
इमरान खान नेतृत्वको सरकार रोजगारी सिर्जना गर्न पनि असफल भयो । पाकिस्तान इन्सिच्युट अफ डेभलपमेन्ट इकोनोमिस्कका अनुसार पाकिस्तानमा बेरोजगारी दर बढेर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पाकिस्तानका २४ प्रतिशत शिक्षित मानिस बेरोजगार छन् ।
पाकिस्तानको सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि सन् २०१७-१८ को तुलनामा बेराजेगारी दर पछिल्ला वर्षमा ५.८ प्रतिशतले बढेको छ । सत्तामा आउनुअघि खानले १ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी योजना ‘कामयाव जवान’ कार्यक्रमले पनि ५० हजार मात्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो ।
३. ऋणको बढ्दो बोझ
अत्यधिक विदेशी कर्जा लिएको भन्दै पाकिस्तानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले बारम्बार चेतावनी पनि दिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार पाकिस्तानको विदेशी ऋण ९० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । वैदेशिक ऋणको २० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ ऋण छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार इमरान सरकारमा आएसँगै विदेशी ऋणमा ७० प्रतिशतले वृद्धि भयो ।
पाकिस्तान सरकारले विदेशी ऋण तिर्नकै लागि ऋण पनि लियो । टाट पल्टिनबाट जोगिन पाकिस्तानले लगातार ऋण लिइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार पाकिस्तानले कोरोना कहरका दौरानमात्रै १० अर्ब डलर ऋण लिएको थियो ।
४. बढ्दो महँगी
इमरान खान सत्तामा आएसँगै पाकिस्तानमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदै गयो । पाकिस्तानको तथ्यांक विभागका अनुसार खाद्य र ऊर्जामा बढेको मूल्यका कारण सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२२ मा मुद्रास्फिति तीन गुणाले बढ्यो ।
पाकिस्तानको तथ्यांक विभागका अनुसार अक्टोबर २०१८ देखि अक्टोबर २०२१ को अवधिमा पाकिस्तानमा विद्युतीय महसुल मात्र ५७ प्रतिशतले वृद्धि भयो । महँगी चर्किँदै गएपछि इमरान खानले हैरान भएर आफू आलु टमाटरको मूल्य नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री नभएको जवाफ फर्काएका थिए । उनको यस्तो भनाइपछि पाकिस्तानी जनता आक्रोशित भएका थिए ।
५. बर्बाद अर्थव्यवस्था
इमरान खान सत्तामा आएसँगै निरन्तर पाकिस्तानको अर्थ व्यवस्था कमजोर हुँदै गयो । खानले पछिल्लो साढे तीन वर्षमा पाँच जना अर्थमन्त्री फेरे । यति गर्दा पनि आर्थिक मोर्चामा भने खान कमजोर सावित भए । पाकिस्तानको आर्थिक विकास दर २०१८ मा ५.८ प्रतिशत थियो भने २०२१ मा यो दर घढेर ३.६ प्रतिशत हुन आयो ।
६. पाकिस्तानी मुद्राको मूल्यमा गिरावट
इमरान खान सत्तामा आउनु ठीकअगाडि १ अमेरिकी डलर बराबर १२३ पाकिस्तानी रुपैयाँ थियो । तर, आज यो मूल्य बढेर १८३ पुगेको छ । खानको पालामा पाकिस्तानी मुद्राको मूल्यमा ३३ प्रतिशतसम्म गिरावट आयो ।
७. सेनासँग टकराव
पाकिस्तानमा सत्ता चलाउन सेनाको समर्थन जरुरी मानिन्छ । पाकिस्तानका विपक्षीहरूले पनि सेनाले नै इमरान खानलाई जिताएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय सेना र इमरान खानबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको आकलन गरिएको छ । गत वर्षको अक्टोबरदेखि उनीहरूको सम्बन्ध चिसिएको बताइन्छ । सेना र खानको सम्बन्धमा चिसोपन आउनुको कारण पाकिस्तानको गुप्तचर निकाय ‘इन्टर स्टेट इन्टेलिजेन्स’ अर्थात् ‘आइएसआई’को प्रमुखमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विवाद हो । खान यो पदमा आफ्ना विश्वासपात्र इमरानले फैज हमिदलाई राख्न चाहिरहेका छन् भने सेनाले आफ्ना लेफ्टिनेन्ट जनरल नदिम अजुमलाई राख्न खोजिरहेको छ ।
८. विवादित बयान
सत्तामा आएसँगै इमरानले विपक्षीमाथि निरन्तर प्रहार गरे । आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई उनले ‘चोर’, ‘डाँकु’ समेत भने । अमेरिकाले आतंकवादी करार गरेका ओसामा विन लादेनलाई खानले जुन २०२० मा शहीद घोषणा गरे ।
९. असफल विदेश नीति
आजभाोलि खान आफू विदेशी षड्यन्त्रको सिकार भएको दाबी गरिरहेका छन् । शीत युद्धपछि पाकिस्तान पश्चिमा देशको हिमायती बनेको थियो । अफगानिस्तानमा पनि पाकिस्तान अमेरिकी सहयोग बनेरै रह्यो । तर, अफगानिस्तानबाट अमेरिका पछाडि सरेसँगै पाकिस्तान पनि पछाडि हट्यो ।
सधैँ अमेरिकाको सहयोगी रहेको पाकिस्तानमा इमरान खानले पाकिस्तानलाई अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त गराउने दाबी गर्दै आएका थिए । अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त हुने नाममा खानले चीनसँग सम्बन्ध बढाए । पाकिस्तान चीन र रुससँग नजिकिएपछि अमेरिका पाकिस्तासँग रुष्ट भयो । रुस युक्रेन युद्धको एक दिनअगाडि रुस पुगेर खानले आफू रुसको पक्षमा रहेको सन्देश दिए ।
१०. अशान्त पाकिस्तान
‘साउथ एसिया पीस रिपोर्ट’का अनुसार सन् २०१८ मा मात्र पाकिस्तानमा साना ठूला गरेर १ सय ६ वटा आतंकवादी घटना भए । २०२१ सम्म पुग्दा यो संख्या बढेर ३ सय २५ पुग्यो । पाकिस्तानलाई अशान्त बनाउने मुख्य संगठन हो ‘तहरिक-ए-तालिबान- पाक’ । यो संगठन अफगानस्तानको तालिबानको पाकिस्तानी रूप हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८, १३:०६:५१